တမ်းပလိတ်:Citation Style documentation/ထုတ်ဝေသူ - ဝီကီပီးဒီးယား
တမ်းပလိတ်:Citation Style documentation/ထုတ်ဝေသူ
< တမ်းပလိတ်:Citation Style documentation
ထုတ်ဝေသူ: ထုတ်ဝေသူ၏အမည်;အဆင်ပြေလျှင် ဝီကီလင့်ခ်ချိတ်ပေးပါ။ထုတ်ဝေသူဆိုသည်မှာမိမိ အကိုးအကားယူထားသောမှတ်တမ်းကို ထုတ်ဝေသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ထုတ်ဝေသူဟူသော ဝေါဟာရကို မှတ်တမ်း (e.g. စာအုပ်, စွယ်စုံကျမ်း, သတင်းစာ, မဂ္ဂဇင်း, စာစောင်, ဝက်ဘ်ဆိုက်)အမည်အတွက် မရေးပါနှင့်။Not normally used for periodicals. "Ltd", "Inc" သို့ "GmbH"စသော လုပ်ငန်းစုအမှတ်အသားများမပါရ။ထုတ်ဝေသောမှတ်တမ်းနှင့် ထုတ်ဝေသူ၏အမည်တူညီပါက ရေးရန်မလို။ (ဥပမာ The New York Times ကုမ္ပဏီသည်The New York Timesသတင်းစာကိုထုတ်ဝေသည်။ဤသို့သောကိစ္စမျိုးတွင် ထုတ်ဝေသူ၏အမည်ကိုမရေးပါနှင့်။ ခေါင်းစဉ်နောက်တွင်ပေ; if work is defined, then publisher is enclosed in parentheses.
place: ထုတ်ဝေသောအရပ်; ဝီကီလင့်ခ် ချိတ်လေ့မရှိ။; မှတ်တမ်းအမည်တွင် ထုတ်ဝေသောအရပ်ပါပြီးဖြစ်လျှင်မရေးရ။; ဥပမာ: The Boston Globe, The Times of India. Displays after the title; if work is defined, then location is enclosed in parentheses. Alias: location
ထုတ်ဝေသောအရပ်: If any one of publication-place, place or location are defined, then the location shows after the title; if publication-place and place or location are defined, then place or location are shown before the title prefixed with "written at" and publication-place is shown after the title.
ထုတ်ဝေသောရက်စွဲ: ထုတ်ဝေသောရက်စွဲနှင့် မှတ်တမ်းရေးသောရက်စွဲမတူမှသာရေးပါ။Displays only if year or date are defined and only if different, else publication-date is used and displayed as date. ဆောင်းပါးပါ အခြားရက်စွဲများကိုရေးသောပုံစံအတိုင်းရေးပါ။;ဝီကီလင့်မချိတ်ပါနှင့်။ Follows publisher; if work is not defined, then publication-date is preceded by "published" and enclosed in parenthesis.
ဖြန့်ချိသူ: ဖြန့်ချိသူ၏အမည် (ထုတ်ဝေသူနှင့်မတူမှသာရေးပါ။). ဖြန့်ချိသူ ကို ထုတ်ဝေသူနှင့်အစားမထိုးပါနှင့်။, but provides additional detail. It may be used when the content deliverer presents the source inaformat other than the original (e.g. NewsBank), when the URL provided does not make clear the identity of the deliverer, where no URL or DOI is available (EBSCO), if the deliverer requests attribution, or as requested in WP:The Wikipedia Library (e.g. Credo, HighBeam). See also registration and subscription.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တမ်းပလိတ်:Citation_Style_documentation/ထုတ်ဝေသူ&oldid=580382" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။